Xogta Bulshada - Aloha United Way 2-1-1
Isbeddellada wicitaanku waxay bixiyaan adeeg bixiyayaasha, wakaaladaha dawladda, iyo siyaasad-dejiyeyaasha garaaca wadnaha halka baahiyaha isbeddelayo.
Waxaan awoodnaa inaan wadaagno xogta muhiimka ah ee wacitaanka si aan gacan uga geysanno qaabeynta wadahadallada muhiimka ah ee hoggaamiyeyaasha gobollada iyo kuwa aan faa'iido doonka ahayn ee ku saabsan goorta iyo adeegyada inta badan loo baahan yahay, waqtiga dhabta ah. Halka 211 tirinta waxay ku siinaysaa hal eegid xogta wicitaanka, waxaan la shuraakoobay Iskaashi Xogta Hawaii si loo bixiyo quusin qoto dheer. Dashboardka wada shaqaynta xogta ee Hawaii waa diyaar halkan. Sawir-gacmeedkan waqtiyeysan wuxuu tusinayaa sida qoysaska Hawai'i ay u socdaan waqti kasta.
Markaan la shaqeyneyno la-hawlgalayaashayada aan faa'iido doonka ahayn, xogta 211, iyo xulashada ballaaran ee dhibcaha kale ee xogta iyo xubnaha bulshada, waxaan awoodnaa inaan ka talinno baahiyaha bulshadeena waxaanan diiradda saari karnaa meelaha aan fursad u helno inaan sameyno saameynta ugu weyn. . Waxaan u samayn karnaa isbeddello si hufan, annagoo ka jawaabayna baahiyaha isbeddelaya, taas oo ka dhigaysa 211 ilo muhiim ah.
2-1-1 Tirinta waa dashboard-ka xogta bixiya xogta la raadin karo oo qaab fudud loo isticmaali karo. Adigoo isticmaalaya 2-1-1 Tirinta, waxaad heli doontaa sawir baahiyaha bulshada gaarka ah oo uu soo bandhigay ZIP code iyo jasiirad dhawaanahan shalay oo kale, taasoo kuu sahlaysa inaad si fudud u hubiso isbeddellada, isbarbardhigga iyo wadaagista macluumaadka.
211 xogta ayaa muhiim u ah bixiyeyaasha adeegga iyo wakaaladaha dawladda ee ka shaqeeya inay aqoonsadaan isbeddellada iyo wax ka qabashada arrimaha degdegga ah, iyo sidoo kale inay qiimeeyaan sida wanaagsan ee macluumaadka ku saabsan adeegga loo faafiyo. Eeg codsiyada sare oo isticmaal kala duwanaanshaha taariikhda la beddeli karo.
Eeg 2-1-1 Tirinta
Sida loo isticmaalo 2-1-1 Counts Dashboard
Haddii aad tahay adeeg bixiye ama aad ku tiirsan tahay macluumaadka ay bixiso adeega 2-1-1, fadlan dib u eeg a hage waxtar leh taasi waxay kugu socon doontaa sida ugu wanaagsan ee loo isticmaalo macluumaadka ku jira dashboard-ka. Waxaad sidoo kale baari kartaa xog dheeraad ah bogga 2-1-1 Tirinta, halkan. Haddii aad hayso su'aalo dheeraad ah oo ku saabsan xogta 211, fadlan nala soo xiriir, info@auw211.org.
DATA - Wadarta wicitaanada, Wadarta Codsiyada, Qaybta Codsiga Sare, Koodhka Sare ee Codsiyada.